Nagu saabsan - Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd.
Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd. waxay ku taalaa caasimada Shiinaha ee dahabka - Zhaoyuan, Gobolka Shandong, waa magaalo leh muuqaal qurxoon iyo gaadiid ku haboon. La aasaasay 2012, aagga wax soo saarka shirkadda wuxuu daboolayaa 27,000 mitir murabac. Waxaa jira in ka badan 200 oo shaqaale ah oo ka tirsan shirkadda oo leh aqoon isweydaarsi wax soo saar oo heer sare ah, xarun cilmi baaris heer sare ah iyo xarun tijaabooyin horumarineed, bakhaarro xirfadlayaal lagu kaydiyo iyo dhismaha xafiis casri ah oo dhammaystiran oo leh wadar maalgashi ka badan 50 milyan oo Yuan ah. Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo horumarinta iyo dhiirrigelinta alaabada fayadhowrka.
Shirkaddu waxay ku dhaqantaa mabda'a "nadaafadda, raaxada, iyo qanacsanaanta". Fikradda adeegga casriga ah ee horumarsan ayaa la soo saaray oo nidaamka CIS ayaa la soo wada galiyay si wada jir ah, kaas oo qaata hanaan maareyn sumadeed dhan walba oo isku dhafan R&D, wax soo saar, iibin iyo adeeg isla markaana soo bandhigaya khadka wax soo saarka xawaaraha sare ee otomaatiga ah iyo habka maaraynta si loo hubiyo wax soo saarka iyo soo saarida alaab tayo sare leh.
Naqshad gaar ah, tayo sarreysa iyo adeeg aad u fiican ayaa ah baacsiga shirkaddu si hagar la'aan ah.
Xayeysiiska xayawaanka ee shirkadda Gigico waxay ka samaysan yihiin dhar tayo sare leh oo aan tolmo lahayn, oo awood u siinaya inay si deg deg ah wax u galaan oo ay nuugaan; polymer wax nuugaya oo lagu daro lakabka gudaha ayaa si adag u xidhi kara biyaha; lakabka sare iyadoo la adeegsanayo tayo sare leh xuub biyeedka PE wuxuu leeyahay dabacsanaan xoog leh mana sahlana in xayawaanka la xoqo; waxaa lagu soosaaraa xariijinta isku xirnaanta adeegga si buuxda-otomaatig ah leh wax soo saar maalinle ah illaa 500,000 oo gogo '.
Qashinka bisadaha ee loo yaqaan 'Gigico cat cat' oo laga soo saaro shirkadeena ma laha wax lagu daro iyo kiimikooyin, awood xoog leh oo nuugista biyaha iyo ureynta wanaagsan, ma laha wasakhda boodhka iyo sidoo kale garsoorayaasha caafimaadka xayawaanka iyada oo loo marayo midab.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyada oo ku tiirsan tayada wax soo saarka xasiloon iyo adeegyada geeddi-socodka ganacsiga xirfadeed, shirkaddu waxay aasaastay xiriir muddo-dheer ah oo deggan oo wadashaqeyn ah oo lala yeesho la-hawlgalayaal badan oo ka tirsan Shiinaha iyo sidoo kale kuwa ka jira Japan, Yurub iyo Mareykanka, Aasiya iyo Afrika, iwm, oo dhidibbada u taagtay la kulanka macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah baahidooda si hufan oo fudud oo kor u qaadaysa tartamada caalamiga ee shirkadaha.
Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd. wuxuu soo dhaweynayaa asxaabta dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada inay soo booqdaan, siiyaan tilmaamo iyo wadahadalo ganacsi.